Uhlalutyo + loyilo = Impumelelo yeMidiya yoLuntu | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 20, 2009 NgeCawa, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
Zeziphi iimpawu eziqhuba impumelelo kwimidiya yoluntu? Njengoko siqhubeka nokukhula emsebenzini, sijonge italente kwaye sifuna umxube olungileyo.
Unyana wam ufundile kwizibalo ... Intombi yam yimvumi… kunye nongqondongqondo wezibalo. Ndinohlalutyo kakhulu… kodwa ndithanda ukuyila ekubhaleni nasekuyileni kwam. Umculo ngokuqinisekileyo sisitshixo sempumelelo kubo bobabini unyana wam nentombi yam. Andiyomvumi, kodwa izinto endizithandayo endizenzayo zincedisile kwimpumelelo yam. Ndiyakholelwa ukuba ukuziqhelanisa nobuchule obungaphandle komsebenzi wakho kuyanceda xa uhlalutya kwaye usombulula iingxaki emsebenzini wakho-ekugqibeleni kukhokelela kwimpumelelo yakho.
Andizicingeli njenge ingcali Kumajelo eendaba ezentlalo kodwa ndinamava aneleyo kuwo okunceda ukukhokela iinkampani kwicandelo lezam kwaye ndibancede Sebenzisa amajelo abandakanyekayo. Phantse yonke imihla ndisebenza kwiiposti zebhlog, imiboniso, iintetho, uyilo lwe-imeyile kunye noyilo lwewebhu. Nganye yezi zinto ziyindlela yokuyila eyenzelwe mna.
Ukuba bendinokutshintsha ixesha lam, ~ 50% yoyilo kunye ~ 50% yeqhinga / yohlalutyo. Andiqinisekanga ukuba ndinokuba njalo creative Kwizisombululo endisebenza kuzo kunye nabaxumi kunye nabo ndisebenza nabo ukuba bendingenalo uhlobo oluthile lokuphuma olufuna ukuba ndiqhelisele yonke imihla. Ndiyabulela kuba ndisoloko ndicelwa umngeni ukuba ndize nesisombululo sokuyila- nokuba kuyilo lomsebenzisi okanye amagama kwiposti yebhlog yokonwabisa.
Njengoko ndijonge kubahlobo bam abaninzi kwishishini abaphumeleleyo, baneendawo ezifanayo zokuyila. Uninzi lwazo lwenza zombini ukukhula kunye noyilo lwegraphical. Abanye ziimvumi kwaye abanye ngabathwebuli beefoto. Bambalwa iimbaleki… kodwa hayi iimbaleki ezilula, ziimigca yamanzi emhlophe, iimbaleki zokubaleka okanye iimbaleki zemarathon. Andibucingi ubuchule obuyimfuneko ukuze umzimba wakho ukwazi ukutyhubela kule mingeni.
Ndihlala ndimangalisiwe kukuva izinto ezenziwa ngabahlobo bam ngaphandle kwabo umsebenzi. Uninzi lwabantu aluhlukanisi phakathi kwecala lokudala lomsebenzi wam kunye nohlalutyo, kodwa ngokuqinisekileyo yinto endiye ndakwazi ukungena kuyo. Ndiyazi xa ndisebenzisa izisombululo kuhlobo ngalunye lokucinga ukunceda ukusombulula enye kwaye kufuneka ndiyenze rhoqo. Kuthatha ukuziqhelanisa rhoqo kunye nokulungiswa okuhle.
I-99% yexesha, kumava am, icandelo elinzima malunga nobuchule alizi nento engekho umntu owakha wayicinga ngaphambili. Icandelo elinzima lenza into oyicingileyo. Seth Godin
Ndingabathanda abafundi beli posi ukuba babelane ngecala labo lokuyila kunye nebhlog okanye ukuphawula ngendlela enefuthe ngayo ngempumelelo kubuchule bokuphumeza imisebenzi yabo. Nceda wabelane!
IINZUZO EZINKULU… Iimfihlo zityhilwe ngoku!
Epreli 20, 2009 ngo-11: 58 PM
Xa ndandiqala umsebenzi wam, ndandichitha iintsuku zam ndibhala kwaye ndisalathisa ubugcisa be-imeyile ethe ngqo. Unengqondo echanekileyo kakhulu. Emva koko ebusuku, ndibhala iinkqubo zesiseko sedatha ukulandelela iziphumo zeposi kubaxumi bam abangenzi nzuzo abangakwaziyo ukufikelela kwiipakethi zokunyusa ingxowa-mali ngelo xesha. Ubuchopho basekhohlo kakhulu.
Kamva, xa ndandingabandakanyekanga kangako kwicala lokuyila lokuphendula ngokuthe ngqo, mna nomfazi wam sabhala ikhathuni enephaneli enye kwiphephandaba leveki (uguqulelo lwaseMilwaukee lweChicago "Umfundi," ebizwa ngokuba yiMilwaukee Weekly). Ndiyenzele yonke i-cartooning.
Bekunomdla ukubona ukuba ndizama kangakanani ukudibanisa zombini iindidi zemisebenzi. Sesinye sezizathu ezibangela ukuba ndizenzele into endiziphilisa ngayo nokuba andibhatalwa ngayo.
Enkosi ngokuzisa esi sihloko sinomdla (kum MNA noko!). Ndijonge phambili kwinto eyenziwa ngabanye ukukrwela ukurhawuzelelwa kokuyila nokuhlalutya!
Epreli 21, 2009 ngo-10: 40 AM
“Ndiza kwenza le nto ndiphila ngayo nokuba andihlawulwa ngayo.” - oko kuthetha konke, Jeff! Ndicinga ukuba ndikwimeko efanayo… nangona bekuya kufuneka ndenze okuthile ukuhlawula amatyala. 🙂
Epreli 21, 2009 ngo-8: 35 AM
Ndingumyili wegraphic emini, kodwa ngeenyanga zikaJanuwari-April, ndithatha umsebenzi wesibini ukwenza irhafu. Kuba ezi zimbini zahluke kakhulu, andidinwa ingqondo njengoko bendiya kuba nomsebenzi wexesha lesibini ndenza into efana kakhulu nomsebenzi wam wosuku.
Xa ndiyila into, ukusebenzisa amacala omabini engqondo yam kuyandinceda ukuba ndisebenziseke kwaye ndiyile. Iphinde yandenza ndaxabiseka eofisini, ndiyakwazi ukucebisa izimvo ezinokunceda kwishishini lethu, kodwa zincinci ngaphandle kwesiqhelo ukusinika umda.
Epreli 21, 2009 ngo-10: 39 AM
Inika umdla kakhulu loo nto – ewe, ngekhowudi yethu yerhafu, kufuneka kuthathe ixesha elithile lokuyila (kodwa hayi kakhulu!).
Epreli 22, 2009 ngo-9: 55 PM
Ndisebenza ngeteknoloji, kodwa ndiyimvumi. Ndicinga ukuba ukukwazi ukukhupha amandla am omculo kunceda ukucacisa ugxininiso lwam kwaye kundenze ndisebenze ngokufanelekileyo.